Home News Khadiijo Diiriye”Dhalinyarada Ciyaartooyda ah Xitaa Gaari BL-ah waa ay Raaceen”
Khadiijo Diiriye”Dhalinyarada Ciyaartooyda ah Xitaa Gaari BL-ah waa ay Raaceen”
Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadashay Wararkii sheegayay qaarkoodna baraha Bulshada lagu soo faafiyey ee ahaa in la dayacay xulka 17-jirada Soomaaliya.
Ciyaartoyda mataleysay xulka Qaranka Soomaaliya ayaa kaalinta labaad markii ugu horreysay kasoo galay tartanka bariga iyo Bartamaha Afrika oo Sanadkaan lagu qabtay dalka Burundi,kadib markii ay la ciyaareen Xulka dalka Tanzania.
Khadiijo Maxamed Diiriye Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in Ciyaartoyda aysan aheyn kuwo Xabsi ku jira,isla markaana Magaalada halkii ay doonaan ay ka mari karaan.
Waxa ay sheegtay in Caruurtaas Iskuulkii ay dhiganayeen fasax laga soo qaaday iyo sidoo kale Waalidintooda,isla markaana aysan mudneyn in la yiraahdo maxaa saas loo yeelay,iyada oo ku baaqday in laga Shaqeeyo horumarka Ciyaaraha dalka.
Ciyaartoyda Xulka 17-jirada dalkeena Soomaaliya ayaa maalma kahor waxaa masuuliyiin ka tirsan dowladda ay ku soo dhaweeyeen Magaalda Muqdisho,iyaga oo dalka Burundi uga soo qeyb galay tartanka bariga iyo Bartamaha Afrika.